အမေရိကန်နိုင်ငံ , ဘားရတ် အိုဘားမား နဲ့ (၄) ဂဏန်းကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # ဒုက္ခပေးတဲ့ အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး စနေ (၁)
# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း »
# အမေရိကန်နိုင်ငံ , ဘားရတ် အိုဘားမား နဲ့ (၄) ဂဏန်းPublished November 6, 2008 | By Dr.Tin Bo Bo	.
အဲဒါကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ သမ္မတ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေရင်း လုပ်ကြံခံရတာ(၆)ဦးနဲ့ သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ်မှာ နာမကျန်းဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားသူ (၄) ဦး – စုစုပေါင်း (၁ဝ)ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေကတော့-
(၁) ဝီလီယံ ဟင်နရီ ဟယ်ရစ်ဆင် – (၉) ဦးမြောက် သမ္မတ
(၂) ဇာခရီ တေလာ (၁၂) ဦးမြောက် သမ္မတ
(၃) အေဘရာဟမ်လင်ကွန်း (၁၆) ဦးမြောက် သမ္မတ – (လုပ်ကြံခံရ)
(၄) ဂျိမ်းစ် ဂါဖီးလ် (၂ဝ) ဦးမြောက် သမ္မတ – (လုပ်ကြံခံရ)
(၅) ဝီလီယံ မက်ကင်လေ (၂၅) ဦးမြောက် သမ္မတ – (လုပ်ကြံခံရ)
(၆) သီအိုဒို ရုစ်ဘဲ့လ် (၂၆) ဦးမြောက် သမ္မတ – (လုပ်ကြံခံရသော်လည်း အသက်မသေ)
(၇) ဝါရင် ဂျီ ဟာဒင်း (၂၉) ဦးမြောက် သမ္မတ
(၈) ဖရင်ကလင် ဒီ ရုစဗဲ့လ် (၃၂) ဦးမြောက် သမ္မတ
(၉) ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီ (၃၅) ဦးမြောက် သမ္မတ – (လုပ်ကြံခံရ)
(၁ဝ)ရော်နယ်ရီဂင် (၄ဝ) ဦးမြောက် သမ္မတ – (လုပ်ကြံခံရသော်လည်း အသက်မသေ)
အဲဒီမှာ ဘာထူးခြားချက်သွားတွေ့လည်းဆိုရင် ဒီ (၁ဝ) ဦးထဲမှာ (၅)ဦးဟာ သူတို့ရဲ့ သမ္မတဖြစ်လာတဲ့ အပတ်စဉ်ဂဏန်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စိုးမိုးဂဏန်း ဖြစ်တဲ့ (၄) နဲ့စားရင် သုညကြွင်းပြီး “ပြတ်” နေတာကို သွားတွေ့ ရပါတယ်။
= ဇာခရီ တေလာ ဟာ (၁၂) ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် (၄)နဲ့စားရင် ပြတ်တယ်။
= အေဘရာဟမ်လင်ကွန်း ဟာ (၁၆) ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် (၄)နဲ့စားရင် ပြတ်တယ်။
= ဂျိမ်းစ် ဂါဖီးလ် ဟာ (၂ဝ) ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် (၄)နဲ့စားရင် ပြတ်တယ်။
= ဖရင်ကလင် ဒီ ရုစဗဲ့လ် ဟာ (၃၂) ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် (၄)နဲ့စားရင် ပြတ်တယ်။
= ရော်နယ်ရီဂင် ဟာ (၄ဝ) ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် (၄)နဲ့စားရင် ပြတ်တယ်။
သီအိုဒို ရုစ်စဗဲ့လ် နဲ့ ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီ ကျတော့ (၂၆) ဂဏန်း နဲ (၃၅)ဂဏန်းတွေဖြစ်ပြီး (၄)နဲ့ စားလို့မပြတ်ပေမယ့် (၄) ဂဏန်းနဲ့ မတည့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ (၈) ဂဏန်းရတဲ့ (၂၆) နဲ့ (၃၅)ဦးမြောက် သမ္မတတွေ ဖြစ်နေပြန်တော့ သူလည်း ဒီကံကြမ္မာထဲမှာ ပါဝင်ပတ်သက် နေတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ (၄) ဂဏန်း နဲ့ (၈) ဂဏန်းဟာ လုံးဝ မတည့်ကြတာကိုတော့ သင်္ချာဗေဒ လေ့လာဘူးတဲ့သူတိုင်း သိလောက်ပါတယ်။
(၄) ဂဏန်း နဲ့ (၈) ဂဏန်း (ယူရေးနပ်စ် နဲ့ စနေဂြိုဟ်) ဟာ ကမ္ဘာ့ရန်သူဖြစ်ကြတာကို ကျွန်တော် နောက်ပိုင်းမှာ တင်ပြပါဦးမယ်။ အထက်ကပြောခဲ့သလို (၄)နဲ့ စားရင် ပြတ်တဲ့ အကြိမ်တွေမှာရယ်၊ ပေါင်းလိုက်ရင် (၈) ဂဏန်းကျတဲ့ အကြိမ်တွေမှာရယ် ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံရတဲ့ သမ္မတွေဟာ ကံဆိုးကြမ္မာဆိုးတွေနဲ့ တွေ့တတ်ကြတာဟာ တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုလို့ပြောချင်ပြောနိုင်ပေမယ့် တိုက်ဆိုင်လွန်းတယ်လို့ကော မဆိုနိုင်ဘူးလားခင်ဗျာ။
အခုတက်လာမယ့် ဘားရတ် အိုဘားမားကျတော့ကော – ?
(၄၄) ဦးမြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် (၄)နဲ့ စားရင် ပြတ်နေပြန်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက (၄၄) ဂဏန်းနှစ်လုံးကို ပြန်ပေါင်းရင် (၄+၄)=၈ ဖြစ်နေတာပါဘဲ။ သူရဲ့ တွဲလုံးက (၄)နဲ့စားရင်လည်းပြတ်၊ ပေါင်းရင်လည်း (၈)ဂဏန်း ရဆိုတာဆိုတော့ “သမ္မတ လင်ကွန်းတို့၊ ဂျိမ်းစ်ဂါဖီးလ်တို့၊ ရော်နယ်ရီဂင် တို့လို ကံကြမ္မာမျိုးသာမက၊ သီအိုဒို ရုစ်စဗဲ့လ် နဲ့ ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီတို့ရဲ ကံကြမ္မာမျိုးပါ” နှစ်မျိုးစလုံး ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သချာင်္ဗေဒပညာရှင်တွေဟာ (၄)ဂဏန်း နဲ့ (၈)ဂဏန်းအတွဲတွေဖြစ်တဲ့ (၄၄) တို့ ၊ (၄၈) တို့ (၈၄) တို့ကို သိပ်ကြောက်ကြပါတယ်။ ဒီဂဏန်းနှစ်လုံးတွဲမိရင် ပြဿနာကြီးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နောက်တိုက်ဆိုင်မှုက အိုဘားမားကိုယ်တိုင်က (၄)ဂဏန်းသမား။ သြဂုတ်လ (၄)ရက်နေ့မှာမွေးတယ်။ ပြီးတော့ အခု သမ္မတပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရတဲ့ အသက်ပိုင်းက (၄၈)နှစ်။ (၄) နဲ့ (၈) အတွဲဘဲ။ နောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တဲ့နေ့ကလည်း နိုဝင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့လေ။
နောက်ပြီး အဲဒီရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ ကောင်းကင်ဂြိုဟ်သွားအရ ကုံရာသီမှာရှိတဲ့ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ် နဲ့ သိဟ်ရာသီမှာရှိတဲ့ စနေဂြိုဟ်တို့ဟာ (၁၈ဝံ) ဒီဂရီ (သမသတ်အမြင်) နဲ့ ဒီဂရီ အတိအကျ မြင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ဆိုတာ (၄)ဂဏန်း ပိုင်တဲ့ဂြိုဟ်ဖြစ်ပြီး စနေဂြိုဟ်ကတော့ (၈)ဂဏန်းကို ပိုင်ပါတယ်။ (၁၈ဝံ) ဆိုတဲ့ သမသတ်အမြင်ကတော့ အနောက်တိုင်းနက္ခတ်ဗေဒင်ပညာမှာ အဆိုးဆုံး ဂြိုဟ်မြင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကို ခြုံပြီး သုံးသပ်ရရင် အိုဘားမားဟာ (၄)နဲ့စားရင် ပြတ်တဲ့အတွဲထဲမှာ ဝင်နေပြီး ပေါင်းလိုက် ရင်လည်း (၈)ဂဏန်းဖြစ်တဲ့ (၄၄)ဦးမြောက် သမ္မတဖြစ်နေတဲ့အတွက် အတော်ရင်လေးစရာပါ။ သမ္မတလင်ကွန်း၊ ဂျိမ်းစ်ဂါဖီးလ်၊ သီအိုဒိုရုစ်ဗဲ့လ်၊ ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီ၊ ရော်နယ်ရီဂင်တို့ရဲ့ ကံကြမ္မာမျိုးကနေ လွတ်မြောက် နိုင်ပါ့မလား။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရယ်စရာလိုလိုနဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုက သေနတ်ပစ်ခံရပြီး မသေဘဲ လွတ်မြောက် လာတဲ့ သမ္မတ ရော်နယ်ရီဂင်ဟာ (၄)နဲ့စားရင် ပြတ်တဲ့ (၄ဝ)ဦးမြောက် သမ္မတဖြစ်နေတော့ သူရဲ့ ကံကြမ္မာ မကောင်းတာကို ယတြာချေတဲ့အနေနဲ့ သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ သူဟာ (၁ဝ)မိနစ်လောက် ရှာမတွေ့ဘဲ ပျောက်နေပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထက် (၁ဝ)မိနစ်နောက်ကျ ပြီးမှ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲကို ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (အိမ်ဖြူတော် တနေရာရာမှာ ယတြာချေနေတယ်နဲ့ တူပါတယ်)
ဒါကြောင့် သူဟာ သေနတ်ပစ်ခံရပေမယ့်လည်း မသေဘဲ လွတ်မြောက် လာတာလို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ရော်နယ်ရီဂင်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ နက္ခတ်ဗေဒင် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ လည်းဆိုကြပါတယ်။ ဒီယတြာကို သူ့မိခင်က ပြုလုပ်ပေးတာလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါက အရပ်စကားလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဂဏန်းဗေဒင်ပညာအရ ဘားရတ်အိုဘားမားအတွက် အခုရောက်ဆဲ အသက် (၄၈) နှစ် ဟာ (၄)ဂဏန်း နဲ့ (၈)ဂဏန်း အတွဲဖြစ်ပြီး ၊ (၄၉) နှစ်ကျတော့ ပေါင်းကိန်းဟာ (၄) ပြန်ကျနေတာကြောင့် ဒီအသက် ပိုင်းတွေမှာ (ဂဏန်းဗေဒင်အမြင်အရ) ပြဿနာကြီးတွေ ကြုံတွေ့နိုင်ပြီး အဆင်မသင့်ရင် အသက်ကိုတောင် ရန်ရှာ ခံရနိုင်ကြောင်း၊ သူ့အရင် သမ္မတတွေတုန်းကလည်း ဒီလို အသက်ကို ရန်ရှာ ခံခဲ့ရကြောင်းကို တင်ပြလိုပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အခု ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ နဲ့ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၊ ဧပြီလ၊ ဇွန်လ နဲ့ အောက်တိုဘာလတွေမှာ ကံမကောင်းနိုင်ကြောင်း တင်ပြလိုက် ရပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged ဘားရတ် အိုဘားမား နဲ့ (၄) ဂဏန်း, သင်္ချာဗေဒ, အမေရိကန်နိုင်ငံ	One comment on “# အမေရိကန်နိုင်ငံ , ဘားရတ် အိုဘားမား နဲ့ (၄) ဂဏန်း”	အေးမြတ်သူ on November 18, 2010 at 8:01 pm said:
ဂဏန်းဗေဒင် ကို စိတ်ဝင်စားတာရယ် အိုဘားမားကို စိတ်ဝင်စားတာရယ်ကြောင့် သူနဲံ ပါတ်သက်တဲ့ ဟောစာတန်း တော်တော်များများ ဖတ်မိပါတယ် နောက်တခုက မြန်မာလိုတော့ သူ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကလည်း အရေးကြီးတယ်နော် ခုတော့ မီးရှဲလ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း နံပါတ် ၈ နော် အနောက်တိုင်းကတော့ ၈ ကို မကောင်းယူကြတာများတယ် ထင်တာဘဲ ဆရာ အလုပ်ပါးလို့ ဆက်ရေးမယ် ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ ကျေးဇူးပါဆရာ
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,208)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,941)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,273)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,241)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,316)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,503)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,528)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,891)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,241)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,254)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,067)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,043)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,788)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,724)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,288)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,095)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,828)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,456)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,178)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,103)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,815)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,665)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,532)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,348)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,243)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,200)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,876)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,651)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,462)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (5,999)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !